ZarNiOo - YourListen
တောင်တွေကွယ်တဲ့လမ်း တောင်တွေကွယ်တဲ့လမ်း ရေး - ပခမ်းဆရာညို ဆို - ဆုတင် တောင်တွေကွယ်တဲ့လမ်း(မောင်မယ်ယောင်လည်)၂မြှောင်သွယ်လို့တန်း(တောင်တွေ)ကွယ်တဲ့လမ်း ခြေတစ်လှမ်းကြွကြွေခမန်းပကုဋေတစ်သန်းမကတန်သူဟန်မူ (အော် တပါးနှမလှလှပပလေးရယ် ခြေတစ်လှမ်း ကုဋေတစ်သန်းတန်သူမယ်)၂ နွဲ့ဆိုးဥာဏ်တွေ ခင်မဆူလိုက်ပါနဲ့ နွဲ့ဆိုးတဲ့ ခရာတဲ့ဟန်တွေ ခင်မဆူလိုက်ပါနဲ့ တကယ့်အဖိုးတန်အမျိုးမှန်ရယ် (ပျိုဖြူရဲ့)၂ မင်းလေးလိုက်တော်မူ ဖြူပြာ မူယာ သူဇာ ဒေ၀ီတစ်ပပါး ကိုယ့်ဟန်တော်ပါးရယ်နဲ့ မိမိလေးရဲ့ဟန်တော်ပါးရယ်နဲ့ ထားမောင်ကြင်သူ (ရွှေအဆင်းနဲ့ပိ်ျုဖြူ ထမ်းကာမောင်ချော့ ချီမယ့်သူ မင်းမခွဲနဲ့ လိုက်တော်မူ )၂ဘ၀ဆုံးအောင် မောင်ဘုန်းကြင်မယ့်သူ ရွှေလက်တွဲ (ဖေတွဲကာပယူ)၂
ZarNiOo 00:04:43 590Downloads0Comments
သဘင်ဆန်သောဘ၀ သဘင်ဆန်သောဘ၀ ရေး - ရွှေတိုင်မောင်ကို ဆို - ဆုတင် ဇာတ်အခြေအစက(အပျိုတော်)၂ ညဉ့်ဦးယံအချိန်ကျ ပရိသတ်ကမျှော် စိတ်ဓာတကြွပျော်ဟာသပြဇာတ်ဆန်းနဲ့ တခမ်းတနားကခဲ့ရတဲ့ကျနော် ၀န်ကြီးတံတိုင်းကြီးတိုင်းကြီးပြည်ကြီးမနော်ဇာတ်ပန္တွက်ဋီကာကျော်မှတ်ချက်တည်ကာဖော်သဏ္ဌန်လုပ်သရုပ်တူစေမယ်နော် မူးတော်မတ်တော် စည်တော်သံကြား နန်းပါးဝင်စေသနော် ပုဝါဖြူတကမ်း အသာယူလှမ်းပါလို့ သစ္စာထားနှစ်ပါးသွားစို့နော် လက်ဝဲတော်ရံ လက်ယာတော်ရံတွေနဲ့ ပျော်ကြရွှင်ကြ တစ်ညတာနော် အာရုံကျင်းကာလင်းလုသော် မိုးအာရုံကျင်းကာလင်းလုသော် ရယ်ခြင်းကအစ ကခြင်းအလယ် ငိုခြင်းအဆုံး ဇာတ်ခြေကရုပ်လုံးဖော် ဘ၀ဆိုတာလဲ ထိုနည်းသာမျှော် ပျော်လိုက်ကြမဆုံးမော်လိုက်ကြတပြုံးပြုံးဆိုသောဘ၀ နောက်ဆုံးတော့မျက်ရည်နဲ့သာပျော် . . .
ZarNiOo 00:05:23 61	0 Downloads0Comments
စကားဧ၀ကံ စကားဧ၀ကံ ရေး - ရှေးစာဆို ဆို - ဆုတင် စကားလေးလေ့ စကားဧ၀ကံ နှစ်ပါးလေးလေ့ နှစ်ပါးသွေမလန် (အရာရာမှာ မကြွင်းမကျန်)၂(မှန်မှန်ကန်ကန် လင်ရယ်ကချစ်ပါလှတယ်လှတယ် မေတ္တာမျှမယ်မျှမယ်)၂ [ရေရေလည်လည်မင်းနဲ့ငါရယ်(ပေါင်းစို့တူနှစ်သွယ်)] လေးဆူဒီပါ သီတာ ရေမြေမဟီညာ တစ်ကုံးရယ် တစ်ကုံးရယ်ဒီပါလုံးဆုံးပါစေတော့ကွယ် . . . (ကျော့ကျော့ရှင်း ခင်လေး ဟန်မူယာကြွယ် ယဉ်ကျေးသူရယ် ကျုပ်မယား နှုတ်ဖျားချိုလှတယ်) မောင်စိန်မလိမ်ပါဘူး တကယ်မညာပါဘူး တကယ်မေကညာ တစ်ဦးရယ် မိမိမမ လှလှကေသွယ် မင်းကလွဲရင်ဖွဲစကွဲထင်တယ် နှစ်ဖြာညီ သာကီတာ တာရှည်မရွေ့ရအောင် ဘရဏီနတ်သမီးနဲ့တွေ့တောင်မှ မမေ့ဘူးမောင်ချစ်မယ် . . . ရွှေကကွက်ကရေလွှတ်သည့်ပုံနှယ် တွတ်တီးတွတ်တာခရာတယ် ဇောညွတ်စရာ သဒ္ဒါကြွယ် ကောင်းခြင်းငါးဖြာ ရယ် ပြည့်စုံပါဘိတယ် လင်သားအပေါ်ဝယ် မင်းမို့လို့မူတယ်ပါပေကွယ် စည်းစိမ်ချမ်းသာ တိုးတက်စေကြောင်း ဆုတောင်းပါရတယ် တကယ်အမြဲကွယ် ပေါင်းသင်းပါစို့ကွယ် တည်တည်ကြည်ကြည်မှန်မှန်ကန်ကန် စိတ်နှလုံးချိုပါမှ အများရိုသေမှာ သည်တစ်လင်သည်တစ်မယား နှစ်ပါးအရှည်အရှည် စုလျား ဂဟေ ဂဟေ ပေါင်းဖက်မယ်ဗျ နှစ်ကံမျှကြံဆသလေ
ZarNiOo 00:06:33 690Downloads0Comments
မူပုံတာပုံခရာပုံလေး မူပုံတာပုံခရာပုံလေး ရေး - ပထမစန္ဒယားဆရာကြီးဆရာညွန့် ဆို - ဆုတင် (သံရိုး၆ - ပေါက် ) (မူပုံ တာပုံ ခရာပုံလေးရယ်နဲ့ )၂ (ယဉ်ကျေးတဲ့လုံမဒီ)၂ (ရင်တွေချီကာ နွဲ့ယိမ်း)၂ မြင်ရသူတွေဟိန်း လောက်အောင် ကြက်သီးများဖိုကြွလို့ (ပျိုနှမကိုစွဲ)၂ စိတ်ထဲဖြင့်ခင်ပါတယ် (တစ်နည်းလေးလှတာလေးရယ် ပတာလေးရယ် ခင်လေး ယဉ်ကျေးရက်တယ်စွဲမက်ဖွယ် မင်းဂုဏ်သတင်း ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌန်ငယ်)၂ (ပတ်စာပိုး) (မျက်ခုံးကလေးကမှင်တံသွယ်)၂(ယဉ်ဟန်ငယ်ကျော့ကျော့ရှင်း)၂ရှုနေရင်းမြင့်မားထယ် (ပါးပေါ်မှာ စံပယ်တင်မှဲ့ရှင်လေး)၂(အသားတော်လေးကြာညိုနံ့မွေး)၂မြူတိမ်စင်ဝေး ငွေလသို့နှယ် (ရေးရွှေရုပ်ငယ် မူယာသွယ် သူဇာမယ်မယားသနားဖွယ်) (ခရာပို ခွာညိုခါးရယ်နဲ့ )၂ ယောက်ကျာင်္းတွေတို့မြင်ရင် မဆင်ချင်နိုင်ဖွယ်ဆင်းလှတဲ့မယ် (နန်းကိန္တွရီကြန်အင်နှယ်)၂ပုလဲသွယ်ဒန္တာသွားနုခင်ထွားငယ်ယဉ်ဟန်ခြားအသားဆပ်သ၀ါနဂိုမှာလဲဝါဂွမ်းလိုသန္တာရည် နှုတ်ခမ်းမှာ (တေးထပ်) (ဥမ္မာဒန္တီသို့အလား မကွာတယ်)အသားမှာ ပြည့်ဝန်းလို့ ဇဗ္ဗူကျွန်းရှေ့ဗြုပ္ဗာ မှန်းမျှော်သည့်ခါ (လပြည့်ဝန်းထွန်းသော်တာလို)၂ထွက်လာသည့်ပုံကဲ့သို့လေး ရေးရုပ်သွင်မြင်လျှင် ဇမ္ဗူတိုင်းမှာ တုနှိုင်းမမြင် အလှတွင်ကျက်သရေထူးလို့ မြင်သူမူး မူးလောက်ပါရဲ့ခင်(သံရိုးသဖြန်ချ)
ZarNiOo 00:06:52 660Downloads0Comments
မုန်းလို့မဟုတ်ဘူး မုန်းလို့မဟုတ်ဘူး ရေး - ဆရာထာ ဆို - ဆုတင် လောက လောကဓမ္မတာ မဖို တိုင်းဟာ အချစ်ရယ်အမုန်းရယ် အလွယ်သုံးလို့ မဆုံးဖြတ်သင့်ပါ စိန်ကဲရွှေကဲ လူကဲခတ်ရခက်တော့တာ အချစ်ရေးရာ တွေးစရာကျယ်ဝန်းလှတာ ဒါဖြင့်ရင် မုန်းလို့လား မုန်းလို့လားဖြေဆိုပါ မိုးနဲ့ကြွက်လိုအိုးနဲ့သရက်လိုပုံတင်ကာနှိုင်းယှဉ်ပြရရင်တော့မည်းသော်လည်းမရွာဘဲရွာသော်လည်းမမဲဘဲသည်းတဲ့မိုးလိုပါမြေအောက်ကိုဖောက်ပေမယ့်အောင်းချင်မှလည်းအောင်းတက်တာတွင်းကိုမဖောက်ပဲအောင်းသည့်ကြွက်လိုပမာ အပြင်ရံဝင်းမှည့်၍ အတွင်းကထိုသရက်သီးဟာ မြည်းကြည့်တော့ ချိုမလို ချဉ်လည်းချစ်တက်တာ အမြင်မှာအေးပြီးအတွင်းက နွေးတက်ပါသတဲ့ ရေအိုးလေးရဲ့ သဏ္ဌန်ပမာ (ဒါဖြင့်ရင်မုန်းလို့လား)၃ (မုန်းလို့မဟုတ်ဘူး)၃ စိတ်ကူးကြည့်စမ်းပါ
ZarNiOo 00:06:29 460Downloads0Comments
အကျီင်္ပါး အကျီင်္ပါး ရေး - ရှမ်းပွဲဆရာဒင်ကြီး ဆို-ဆုတင် မြို့မန္တလာ ကိန်းယူဖို့စကားရယ်နဲ့ တို့မြန်မာ မိန်းမပလီတွေက များပါဘိ အထည်အကျီင်္ပါးရယ်နဲ့ မျက်ထားချို ပလာကျင်းတော့မလိုပလာရင်းနော်အမူပို၍လူပျိုကိုမြူချိုဦးတော့မလားအထူဆိုရင်ပူလို့မုန်းတာကြောင့်အမြင်မှာရင်မှာနှုံးတယ်ကွယ် ပြုံးတော့မလိုလို . . . ငယ်ရွယ်သူ နားမလည်သေးသောကြောင့် အရွယ်ကတူ တရားအရည်နဲ့ မဝေးရအောင်လို့ အများသိဖို့ရေးပါတဲ့ သီချင်းတစ်ဘောင်အဆို အလင်းရောင် ဗြဟ္မစိုရယ်နဲ့သမာဝါစာတမ်း မောင်ချစ်ဖွယ်ရဲ့ သမာဝါစာတမ်း . . .။ (မြို့ နဲ့ဂရာအတွင်းဝယ် တို့မြန်မာတသင်းရယ် တချို့ကငြင်းပယ် ကိုယ့်ဘာသာချင်းရယ်မို့လင်းရပါတယ်)၂ အရှက်အကြောက်ကုန်ပြီ ကြုံလှီကိန်းဝယ် (ခါးမှာလျှော်သရက်ထည် ကြက်သွန်ခွန်ဆိုထင့်ကွယ်)၂ (အိုက်လို၊့အပါးဆုံးကို အားလုံးစုံမက်တယ်)ခေတ်အလိုက် နှစ်ချိုက် အစစမို့ခွကျပါတယ် (အထည်အကျီင်္ပါးနဲ့ ကာလသားအပေါ်ဆွယ် ငါ့သမီး ငါ့သားငါ့မယားဖို့ဝယ် (မန္တလေးမြို့ချစ်ဖွယ် )၂ မစိန်သုံ ဂုံအိပ် ချုပ်ပေးမယ်) (မယ်သုံရယ်အတည်စုံ/အဆင်စုံဝယ်ခဲ့မယ်)၂သားကငယ်သမီးကငယ်အကျီင်္ပါးဝတ်ရင်ကွယ်အများကြည့်တော့မှားမိမှာ မို့ပယ် ၊ ဘာရောညာရော အ၀ှာကော မမြင်ဝံ့တယ် ၊ မသုံးတယ် အလုံးအထည် ပိုးဖြူရင် ဖုံးဆင်ဦးကွယ် ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေက အင်္ဂလိပ်အတုခိုးပါလို့ တစ်မျိုးကစတိုင်ထည် အကျီင်္မပါးနဲ့ မယားသုံရယ် လူမြင်သူမြင် မသုံးသာဘု အမြင်မတော် တမင်ချော် ဘုန်းရင်ဖြင့် နှလုံးမချိရင်ဝယိ မြန်မာလို တစ်မျိုးပ ကုလားလို တစ်သွယ် မယ်သုံ ဘယ်ပုံချွဲသော်လည်း မောင်ချစ်ဖွယ်ကမခွဲပါဘူး အမြဲကွယ် ပေါင်းတော်မူဖို့တကယ် (မစိန်သုံ)၂ လုံလုံခြုံခြုံ ၀တ်တော်မူပါကွယ်
ZarNiOo 00:06:00 590Downloads0Comments
ဘုံဓမ္မတာ ဘုံဓမ္မတာ ရေး - ဧရာဝဏ် ဦးအောင်ထွန်း ဆို - ဆုတင် ဘုံဓမ္မတာမှာ ကြုံရလေသမျှ ကာမစိတ်တွင် တရားနဲ့တွေးကြ ၅၄-၀ါပင် (ဟောဒီလောကီတစ်ခွင် တွေ့မြဲကြုံမြဲ ဆုံမြဲဓမ္မတာပင် သမုဒ္ဒသံယောဇဉ် ဇွတ်တိုးကြည့်တဲ့အမြင်)၂ (ချစ်ကြင်နာ မေတ္တာလွန်ကဲ လွန်ကဲ လွဲမသွေပါ စေတနာထားလို့)၂သူမားထက်ပိုတဲ့လင် (ဒွတ္တိသာတောင်ကမ္မ လွတ်ငြိမ်းအောင်ရှာမရ ကာမကိလေတစ်ခွင်)၂ (ခင်ခင်မင်မင်ချစ်မ၀နိုင်တဲ့လင်)၂ အရိယမောဟပိတ်ပင် ပရိဟာမယား မယားစောလှတဲ့စိတ်တွင် (ကာမဆယ့်တစ်ဘုံသားမို့ မယားကိုချစ်ခင် နိစ္စအမြဲပင် တဆိတ်ကမှမခွဲချင်)၂ (ဇောကာမဂုဏ် တရားရယ်နဲ့ယှဉ် မနောအာရုံမှားတဲ့လင် ချစ်တဲ့သံယောဇဉ် ကြိုက်တဲ့သံယောဇဉ်)၂ ရှစ်ဆယ့်ကိုးသွယ် ဧက၀ုတ္တိတရား အခုရှိသား ရှုကြည့်အများ စဉ်းစားဖွယ် ချစ်ချစ်ခင်ခင် သဘောဝယ် စောလှတယ် ကြင်ကြင်နာနာသနားဖွယ် ငါးဆယ့်လေးသွယ် စတုပညာသရယ်က ပုထုဇဉ်သဘာဝချစ်ရခင်ရကြင်ရပါတယ်လင် (၁၅၀၀ -နယ်မှောင် ကိလေသာ မကင်းတယ် ရှင်းပက်ခုဝယ်-နုနယ်)၂ မေတ္တာတရား ပွားများရန်ဖို့ကြံပါတယ် စိတ်ကြံ စိနာန်မှန်းကာရွယ် ပန်တထာရွယ်ကြံပါတယ်-ပါရမီ စာစီကုံးလို့အဆုံးတိုင်ကြင်ပါမယ်. . .
ZarNiOo 00:06:06 650Downloads0Comments
ခုနှစ်သံချီမြိုင်ထ ခုနှစ်သံချီမြိုင်ထ ရေး -ရှေးစာဆို ဆို-ဆုတင် (ကျား) လေးပျိုနှမ အကိုကချီမယ် ညိုမြပလီရယ် အကိုကချီမယ် တီတီတာတာစကားတွေမကြွယ်လိုက်ပါနဲု့ ထားပျို့မယ်ရဲ့လေး (မ) စုံမြိုင်လယ် တောမြိုင်ကြားဝယ် ပြောင် ဆင် ကျားရဲ ပေါလှတယ် (ကြောက်တယ်)ဘုရားလေး (ကျား)နန်းကေသီ ဒေ၀ီခင်ရယ် ဆန်းထွေညီ ရေယာဉ်ရဂုံဝယ်ဇော်တကုန်းကညာရဲ့မောင်ဘုန်းမှာကွဲ့ လက်ရုံးညာနဲ့ ပွေ့မယ် ပွေ့မယ်လေး (မ) မိန်းမသားမို့အားငယ်တယ်မောင်ခေါ်ရာလိုက်နိုင်ရိုးလား ဟိုနေစွယ် ထိုးသနဲ့ ၀တ်လဲတော်ရွှေပုဆိုး ထီးမိုးပါ့ကွယ်လေး (ကျား)ချောင်ဟိုအကွေ့မှာ ညောင်ညိုရိပ်သာ ညောင်ညိုရိပ်သာ ချောင်ဟိုအကွေ့မှာ အမောပြေတစ်ထောက်နား တောခြေဇောက်များ ခောမေစ၊ံတောက်မယား၊ရဲ့ ကိုင်ထားပါ့မယ်လေး (မ)(သစ္စာထားမယ်ရှင်)၂ (ကျား)(ချစ်စွာမယားသယ် . .လင်/ခင်)၂ (မ) (ထားပျိုမယ် သွားစို့ကွယ် )၂ (ကျား)မောင်ထမ်းလို့ခေါ်ပါ့မယ်. . . .
ZarNiOo 00:05:38 670Downloads0Comments
ညီတော်မင်းနန် ညီတော်မင်းနန် ရေး - ဦးစိန်ကတုံး ဆို - ဆုတင် (တမင်မျှော်လို့ပြောပြမယ်ကွယ့် ထင်ပေါ်တဲ့ အချောရသော်လည်း အတည်နော် မငြင်းနော် ပြည်ပေါ်သတင်းလျှံ ရင်တော်ဂေါတမရယ်က ၀ဇီတော်အလင်းပြန် ညီတော်မင်းနန်) နတ်တမျှပမာညီ အံသာနတ်စခန်းတွေနဲ့အော်ဘဒ္ဒကလျာနီကို မမြင်ပါရင် တစ်ရက်မကလွမ်းမိတာကြောင့် မင်္ဂလာလက်ထပ်နန်းကိုတဲ့ ဘုရားပါကြွပါဟူ မယားပြလို၍ အပါးက တင်လျှောက်ပြန် ဘုရားဇိနံနိဗ္ဗာန်နန်းကို ၇က်တိုတိုနဲ့ လှမ်းမြန်းရအောင်လို့ ပြည်ပေါ်ညီတော် သပိတ်ထမ်းပါလို့ တောလမ်းကအပြန် သစ်ငုတ်တိုခြောက်စပေါ်က မျောက်မနဲ့ပမာညီ ကလျာညီနဲ့မတူလား ဘယ်သူလှပြောတာ သဘောမကျ အော်ဂေါတမဇိနံ အမယ်မင်းဆိုရက်လေတဲ့ကံ ကျုပ်ညီမင်းနန်အနှိပ်စက်ကိုခံ သပိတ်ဖက်လို့ငိုပြန် တရားရင်းခံ မမှားမယွင်းရန် စကားသီချင်းသံသုံးပြန် ကတုံးဥာဏ် ကြောက်စရာ့ဟန် မျောက်မသဏ္ဌန် ပန်းဝတ်မှုံ စုံမြိုင်ယံ ဘုရားစေတစ်ပါး ဝေယံကောင်းကင်ခရီးသုံးလူ့ဘ မြတ်စွာမြတ်ကညာ ပြသည့်နည်း ညီတော်ကငြီး နတ်သမီးထင်မြင်ပြန် အရိပ်ရာ လက်မခံ အ၀ိဇ္ဇာ ပစ္စယံ ထပြန်ကြွပြန်ဥုံအနိစ္စ ဒုက္ခရုပ်အလှဆင်ခြင်ပြန်(ကြည့်ပြန်ရှုပြန် တောစုံမြိုင်ယံ )၂ဆူဆူညံညံ လူသံမကြားအောင်တောထွက်မယ်ကြံ ၀တ်ကြောင်ကိုလွတ်အောင်ရုန်းမဲ့ ကတုံးစိန်ကကြံ တကယ်ရှုဆင်ခြင်ပြန် မယ်ခုမြင်ရင်အံ ကိန်းအကျဆင်ခြင်ပြန် ယိမ်းသမလေးတွေမြင်ရင်အံ နောင်သိမ် မဆုံးပါဘူး မောင်စိန်ကတုံးရဲ့ နိက္ခမ ပါရမီဥာဏ်
ZarNiOo 00:07:04 540Downloads0Comments
လှသူဇာ လှသူဇာ ရေး - စိန်ဗိုလ်တင့် ဆို - ဆုတင် အို. . .လှသူဇာ အလှတကာ ပဂေး ဆေးရေးမမီတဲ့ အလှပိုင်ရှင်လေးလှသူဇာ ကောင်းကင်မိုးယံမြင့်မှာ တင့်တယ် ၀င့်ကြွားလှ အားပိုတဲ့နတ်မိမယ်လေးပါ တိမ်ဖူးတွေတိမ်ညွှန့်တွေများ စားပြီးရင်းမွေးဖွားလေသလား ဟင် လှရက်ပါပေ့ (သူဇာ)၂ ရှုမ၀နိုင်သော (ချော)၃ နှမလှသူဇာ လမင်းလိုဝင်းတဲံ့မျက်နှာ ကြာပန်းပမာ လင်းတဲ့မျက်ဖန် သိဂီင်္ရတနာ ရွှေရောင်လင်းသကို အသားတော်လေးဝင်း ၀ါပိတုန်းရောင်ကြော့ နက်မှောင်ကျော့ကျော့ မျက်တောင်ကော့နဲ့ဆံကေ သုးံတောင်ထွာယဉ်ကိုယ်နွဲ့နှောင်း ဆင်နှာမောင်းသို့ ပြိုင်ရှားတုဘက် ကိုယ်ဟန်သွယ်လျာ နှစ်သက်ဖွယ်ရာ သိမ်မွေ့ဖွယ်ရာ နှုတ်ဖျားက (အပြောချိုသာ)ချစ်သူနှမ အပြစ်ဟူသမျှကင်းစင်လှတဲ့ (ချစ်သောလှသူဇာ)၂
ZarNiOo 00:05:59 390Downloads0Comments
ZarNiOo listened to Naing Nge Taw Yae Yadanar Myar -
ZarNiOo listened to Naing Nge A Hla Ta Yar -
ZarNiOo listened to Say Kyaw Kya Tae Yae -
ZarNiOo listened to Lo At Chet -
ZarNiOo listened to Kabar Gyi Nyein Chan Hla Nay Par -
ZarNiOo listened to Kyo Tin Kar Kwal Tar See Kya Par -
ZarNiOo listened to Thant Shin Kyan Mar Yin Lon Eain Thar -
ZarNiOo listened to Mi Thar Su Kyan Mar Yae -
ZarNiOo listened to Pyat Asin Pyin Kha Na -
ZarNiOo`s Audio Likes
ZarNiOo`s Audio Playlists
Share ZarNiOo"s Profile
profile viewed 292 times